MacOS Yakakwira Sierra 10.13.4 ikozvino inowanikwa kune vese vashandisi | Ndinobva mac
Iyo nyowani vhezheni ye macOS Yakakwira Sierra 10.13.4 ikozvino yave kuwanikwa kurodha zviri pamutemo uye inowedzera dzese nhau dzatakaona mune yapfuura beta vhezheni. Mupfungwa iyi Apple yakashanda yakanangana nekuvandudza iyo system uye iyo Safari browser, saka isu tine chokwadi chekuti vhezheni yacho ichagadzikana zvakanyanya munzira dzese.
Imwe yemitambo mikuru ndeye iyo inowedzera rutsigiro rwekunze maikisheni processor (eGPUs), chitsva chakasvika mune yekupedzisira beta vhezheni yeanoshanda system yakaburitswa uye izvo zvava kuwanikwa zviri pamutemo kune wese munhu. Kune dzimwe nhau mune iyi vhezheni uye dzese dzakapfupikiswa neApple mumanotsi ekuburitsa.
Idzi ndidzo dzimwe dzenyaya idzo Apple inotaura nezve iyi nyowani yekuvandudza iyo yakaburitswa mazuva mashoma apfuura:
Inowedzera rutsigiro rwebhizinesi rebhizimusi muUS Messages.
Gadzirisa grafiki huwori nyaya dzinokanganisa kumwe kunyorera paMac Pro.
Inokutendera iwe kusvetukira kurudyi kuvhura tebhu uchishandisa Command + 9 muSafari.
Inokutendera iwe kuronga Safari mabhukumaki nemazita kana URL nekudzvanya-kurudyi uye kusarudza "Ronga ne."
Inogadzirisa nyaya inogona kudzivirira webhu kuona preview kubva pakuonekwa mumameseji.
Inobatsira kuchengetedza zvakavanzika nekuzadza mazita evashandisi uye mapassword mushure mekusarudza iwo mune fomu rewebhu shamba muSafari.
Inotaridza yambiro muSafari's smart search shamba kana uchitaurirana nemafomu epassword kana manhamba ekadhi rechikwereti pamapeji ewebhu asina kunyorwa.
Inotaridza zvakavanzika mifananidzo uye zvinongedzo kutsanangura mashandisiro anoita data rako uye rinodzivirirwa apo Apple maficha anokumbira iwe kuti ushandise ruzivo rwako.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac Os X » macOS High Sierra » MacOS Yakakwira Sierra 10.13.4 ikozvino inowanikwa kune vese vashandisi
Apple Chitoro Kugadziridza Kusvika kuThe Westchester Mall
Kutanga muna 2020, Apple inoshandisa avo processor mukati maMacs